Fakana takalonaina: Olona fito voasambotra tany Ankilizato
vendredi, 01 décembre 2017 07:39
Efatra andro taorian’ny tranga fakana takalonaina nataon’ny dahalo, zaza amam-behivavy miisa folo miampy Zandary roa, dia olona miisa fito, ka vehivavy ny telo ary lehilahy ny efatra. Atao famotorana eto Morondava izy ireo amin’izao fotoana izao.
Folo mianaka no nataon’ny dahalo takalonaina rehefa tsy nahazo omby tao Ankilizato, Distrikan’i Mahabo izy ireo ny alin’ny alahady 26 novambra 2017.
Tratry ny velampandrika ihany koa ny roa tamin’ireo Zandary valo lahy, niaraka tamin’ny Fokonolona, nandeha hanavotra azy folo mianaka takalonaina.
Vola fito tapitrisa Ariary, niampy omby enina ambin’ny folo, no nomena ireo dahalo ny alatsinainy 27 novambra 2017, taorian’ny fifampiraharahana tamin'ny alalan'ny antso an-tariby, ka nampiasan'ireo dahalo ny findain'ireo Zandary voasambotr'izy ireo, vao navotsotr’ireto dahalo ireo takalonaina roa ambin’ny folo, ka Zandary ny roa.
Nanao bemidina ny Zandary avy any Antananarivo sy ny avy eto Morondava nanampy tamin’ny fikarohana ireo olon-dratsy. Olona miisa fito no voasambotra hatreto amin'ireo ahiahiana ho tompon’antoka tamin’io fanaovana takalonaina io ; avy ao Ankilizato ihany izy ireo.
Anatin’ny famotorana azy ireo ny Zandary, mialoha ny hanolorana azy ireo ny Fitsarana.